Kubudirira - AngelBiss Healthcare Inc.
Kwemakore, AngelBiss inoita zvimwe zvakakosha mumunda weokisijeni concentrators uye inotakurika yekukweva muchina iyo yakaratidzwa ine basa kune vanhu ekurapa kunyorera.
NO.1 - Pamusoro pegumi nemasere matsva ekuvandudza uye kunyoreswa kweoksijeni concentrator uye yekukweva muchina
NO.2 - Bhatiri repasirese rekutanga rinosimudza 5L Oxygen Concentrator, kuchena kweokisijeni kunowana pamusoro pe93%.
NO.3- Pa-Saiti Bvunzo ANGEL 5S 5L Oxygen Concentrator paTibet 15000ft, iyo yakachena okisijeni inogona kuwana pamusoro pe93%.
NO.4 - Rechargeable suction muchina pamusoro pe3hours isina AC simba
NO.5- 20psi yakanyanya kumanikidza Oxygen Concentrator inowana 95%
NO.6- 90psi yakanyanya kumanikidza Oxygen Concentrator inowana 95%
NO.7- 60LPM Dual Kuyerera 4bar Oxygen jenareta vanowana 95%
NO.8 -10LPM 7bar Oxygen Generator inowana 95%
NO.9 - Kuchinja-chinja kweOxygen Concentrator yega yega 0.1% pa95.5% kana kumwe kutaurwa kwakatarwa.
NO.10 - TUV-SUD yakaongororwa ISO13485: 2016 uye CE Certification
NO.11- Zvimwe hazvina kugadzirira kuratidza.
Mune ramangwana rinouya, AngelBiss ichaenderera mberi nekuedza kwayo kwese kuunza zvirinani chigadzirwa ruzivo kune vatengi. Chikwata cheR & D chiri kuita kutsvagurudza kuminda yekushandisa yakasiyana, seNitrogen Oxygen jenareta, Aquarium, uye Ozone Chikumbiro.
AngelBiss inotarisirwa kuve imwe gasi hofori mukati memakore gumi pane yayo yega tekinoroji uye timu yekugadzira.